Farmaajo oo ku dhaqaaqi doona tallaabooyin naflacaari ah | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo ku dhaqaaqi doona tallaabooyin naflacaari ah
Madaxweynaha xilkiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa qorsheynaya tallaabooyin naflacaari ah, sida ay Keydmedia Online ka ogaatay illo xog-ogaal ah oo ka tirsan Villa Somalia iyo Baarlamaanka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Keydmedia ayaa heshay xog lagu kalsoonaan karo oo sheegaya in madaxweynaha xilkiisu dhamaaday uu damacsan yahay in mooshin laga keeni doono maalmaha soo socda Ra’isul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Maxamed Xuseen Rooble , kaas oo la filayo in ay soo abuubulaan xildhibaanada xulafeysiga kula jira Farmaajo.
Gudoomiyihii hore ee Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Shiikh, ayaa asbuucii lasoo dhaafay soo saaray warqad uu kula safanayo Farmaajo, taas oo ka hortimid xilka-qaadistii Wasiirkii hore ee Amniga, Xasan Xudumeey, kuna sheegtay mid aan waafaqsaneyn xeerka isku-dheelitirnaanta waaxyaha dowladda federaalka.
Tallaabadan ayaa noqoneysa weerar qar-iskatuur ah oo dadka qaarkiis ay ku tilmaameen “khamaar kii ugu dambeeyay” oo uu Farmaajo doonayo in uu kusoo celiyo awoodiisii siyaasadeed ee ku wiiqantay dagaalkii uu la galay Ra’isul Wasaare Rooble.
Maxamed Xasan oo ah khabiir u dhuun-daloola siyaasadda cakiran ee Soomaaliya ayaa yiri “Farmaajo hadii uu isku dayo in uu dalka galiyo qalqal siyaasadeed iyo dagaal hor leh, waxaa qasab noqon doonta in Beesha Caalamka ay faragelin toos ah ku sameeyaan si dalka iyo dadka looga badbaadiyo jahwareer hor leh.” Wuxuu intaa ku daray in Farmaajo ay wax walba ka suuroobi karaan, maadaama ayuu yiri ay “siyaasadiisu ku dhisan tahay qulqulatooyin joogta ah.”
Ra’isul wasaare Rooble oo siyaasadiisu tahay mid qunyar socod ah ayaa u muuqda sida qof aan kala jecleyn jilaafooyinka iyo hagardaamada uu Farmaajo maleegayo had iyo jeer. Dadka sida aadka ah ula socda garabka Farmaajo ayaa sheegaya in Farmaajo uu ka-shalaayay sida sahlan ee uu Fahad ugu soo seexiyay RW Rooble. Xiriirka Farmaajo iyo Fahad ayaa lagu waramayaa in uusan aheyn sidii hore, balse uu Farmaajo doonayo in dagaalka RW Rooble uusan ku furin wado halaq-mareen ah.
Cadaadiska faraha badan ee ka imaanaya Beesha Caalamka ayaan sidoo kale u muuqan mid uu Farmaajo dhag-jalaq u siin doono. Kooxda la magac baxday International Crisis Group ayaa soo jeedisay asbuucan in “Farmaajo uu qaato go’aanka RW Rooble, uuna joojiyaa hagardaamada uu la daba taagan yahay.”
Dhanka mucaaradka iyo maamul-goboleedyada ayaa cod dheer taageero ugu muujiyay RW Rooble, sidoo kalena eeddo iyo cambaareyn u soo jeediyay madaxweynaha uu xilkiisu dhamaaday bishii February ee horaanta sanadkan.
Wixii soo kordha, kala soco Keydmedia Online